Rev. Mai Yin Yin Tun – Full Gospel Assembly
Rev. Mai Yin Yin Tun
ဆရာမ မိုင်ယဉ်ယဉ်ထွန်းသည်ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြေပုံမြို့တွင် အဖဦးရွှေဘနှင့် အမိဒေါ်လှရင်တို့၏မွေးချင်း(၄)ဦးထဲမှအကြီးဆုံးသမီးကြီးဖြစ်ပါသည်
မူလတန်းမှအလယ်တမ်းအထိ အ.ထ.က(၂)သဲတန်း မြေပုံမြို့တွင်တတ်ရောက်ခဲ့ပြီး အထက်တန်းပညာကို အ.ထ.က(၁)သဲတန်းတွင်သင်ယူခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၀ခုနှစ်တွင် ကယ်တင်ခြင်းသဘောပေါက်ပြီးသခင်ယေရှုကိုမိမိကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံခဲ့ပါသည်၊ ထိုနောက်ဘုရားသခင်၏ခေါ်ခြင်းကိုခံရပြီး FGBTC ကျောင်းတွင်နှုတ်ကပတ်တော် ကို သင်ယူခဲ့ပါသည်၊ ၂၀၀၂တွင် FGA အသင်းတော်၌စတင်ပါဝင်ခဲ့ပါသည်၊ ၁.၈.၂၀၀၄ တွင်အချိန်ပြည့်ဆက်ကပ်ခဲ့ပါသည်၊ ၂၁.၁၀၂၀၀၇ တွင်လိုင်စဉ်ရ အမှု့တော်ဆောင်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်၊ ၁၃.၉.၂၀၁၇ တွင် သိက္ခာတော်ရ ခန့်အပ်ခံခဲ့ရပါသည်။
ယခုအချိန်တွင် ဒဂုံဆိပ်ကမ်း(၆၉) ရပ်ကွက်တွင် ဧဝံဂေလိတာဝန်ခံအဖြစ်ဆက်ကပ်ပါ ဝင်နေပါသည်။ ၁၄.၂.၂၀၁၅တွင် သိက္ခာတော်ရ ဆရာဦးကျော်ကျော်နှင့်ထမ်းမြားလက်ထပ်ခဲ့ပြီးသား(၂) ယောက်ထွန်းကါးခဲ့ပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် အမှတ်(၄၇၃) မင်းကျော်ပျံချီလမ်း(၆၉) ရပ်ကွက် ဒဂုံဆိပ်ကမ်း ရန်ကုန် တွင် နေထိုင်လျှက်ရှိပါသည်။